चिट्ठामा जितेकाे ६ करोडले खेत किने, खन्ने क्रममा माटोको भाँडा भित्र सय वर्ष पुरानो सिक्का भेटे !
२२ मंसिर २०७६, आईतवार : भारतको केरलका ६६ वर्षका बी. रत्नाकर पिल्लईले गत वर्ष क्रिसमसमा ६ करोड भारु चिट्ठामा जितेका थिए । उक्त पैसाले उनले खेत किने । खेत नजिकै थियो पुरानो कृष्ण मन्दिर । पिल्लईले उक्त खेतमा सख्खरखण्डको खेती सुरु गर्ने निधो गरे ।
मंगलबार खेत खन्ने बेला उनले माटोको भाँडोमा गाडिएको अवस्थामा राखिएको खजाना भेटे ।पिल्लईले उक्त भाँडोभित्र दुई हजार ५ सय ९५ वटा सय वर्ष पुरानो सिक्का भेटे । सिक्काको तौल २० किलो चार सय ग्राम छ । सबै सिक्का तामाका हुन् जो त्रावणकोर साम्राज्यका हुन् । यद्यपि, यसको मूल्य अहिले नै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
यसलाई सफा गर्न ल्याब पठाइएको छ । सफा भएपछि विशेषज्ञले यसको मूल्य निर्धारण गर्ने भारतीय संचार माध्यमले बताएको छ । सन् १८८५ देखि १९४९ सम्म त्रावणकोरको शासन रह्योः सिक्का त्रावणकोरका दुई महाराजाको शासनकालको क्रममा चलनमा थियो । चिट्ठामा जितेको ६ करोड भारुले उनले खेत किनेका थिए । एजेन्सी